Ndị nwụrụ Christ ga-apụta nke n'ili ha na opì. Ha ga-agbanwe na anyị dị ndụ.
The mgbanwe ga-abụ nnọọ ngwa ngwa. Ọ ga-eme "a oge, na a oge." Basic ederede kwupụtara na a ugbu a, "a atomo" nke sụgharịta ka "indivisible oge," na a oge (a mfri eke ofthalmú) "ngwa ngwa karịa anya pụrụ itabi."
Anyị bụ ndị kwere na-eme ka oge owuwe etịbe, tinyere ndị na-ebilite gbanwee. The mgbanwe ga-eme "a oge, na a oge, na-afụ opi ikpeazụ." Pọl na-ede banyere nke a ma anyị na-agụ na Mb, 1 Ndị Kọrịnt. 15: 51-53:
"Lee, m na-agwa gị ihe omimi: Anyị ga bụghị ihe niile na-ehi ụra, ma anyị niile ga-agbanwe, Na a oge, na ntabi anya na-afụ opi ikpeazụ. N'ihi na opi ahụ ga-ada, ndị nwụrụ anwụ ga-ebilite na anyị ga-gbanwee. N'ihi na nke a pụrụ ire ure aghaghị eji ejiji ya na imperishable, na nke a na-anwụ anwụ ga-eji ejiji anwụghị anwụ. "
Mgbe ikpeazụ ada, ọ bụ mgbaàmà na ndị nwụrụ anwụ ga-akpọlite. Ndị nwụrụ Christ ga-apụta nke n'ili ha na opì. Ha ga-agbanwe na anyị dị ndụ.
Anyị n'ụwa obibi
"Nke a na-ere ure" na-ezo aka bụ ndị nwụrụ anwụ, mgbe "ndị nwụrụ anwụ" na-ezo aka ndị na-ebi. ? 2 Cor. 5: 1-5 na-enye azịza ya:
"Ma anyị maara na ọ bụrụ na tent na anyị n'ụwa obibi na-agbajikwa ala, ya mere, anyị nwere a ụlọ Chineke, a ụlọ-ejighị aka mee, ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi na nke a anyị na-asụ ude kwa, na longs kpuchie na anyị obibi nke si n'eluigwe, ka anyị ozugbo anyị na-yi uwe na ya na anyị ga-hụrụ gba ọtọ. N'ihi na anyị bụ ndị nọ na a tent asụ ude nke na-anyịgbu, ọ bụghị n'ihi na anyị chọrọ ịbụ unclothed, ma yiri uwe n'elu, nke mere na efu nwere ike lodara site ndụ. Ma, ọ bụ kwadebere anyị n'ihi na nke a bụ Chineke, dị ka ihe ibé, o nyekwara anyị na Mmụọ Nsọ. "
A tent bụ dịtụ na-adịghị ike, a elebara, nwa oge obibi. Na a ndụ jupụtara na ọnwụnwa, anyị na-eze ume na-agụsi agụụ ike ka oge ahụ ga-abụ n'ime mgbe Chineke na-ewepụta njedebe ndụ ebe a na guzosie ike alaeze ya.
The mgbanwe a na-akọwara na Phil. 3: 20-21
"Ma anyị ndị amaala dị n'eluigwe, si ebe anyị na-echere Onye Nzọpụta, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye ga-agbanwe anyị ọjọọ ahụ, na ha ga-adị ka ya na aru nke ebube, site na ike ọ na-enwe ike nọrọ n'okpuru ya ihe niile."
Anyị asụ ude nke nke agụụ na-yi eluigwe ahụ, nke bụ ebube Jesus ahu. Olileanya anyị bụ na-zere inwe yipu na kama inwe överkläda anyị ebube nke ahu. Na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Chineke kwadebeere anyị. Mgbe ndị nsọ uwe ebube nke ahụ, ndị na-abụghị ndị kwere ekwe na-gba ọtọ na-agba ihere. N'ihi na anyị bụ eluigwe ụmụ amaala, anyị na aru nke ebube, mba ejiji nke anyị nwere iburu eluigwe ụwa.